ယူနိုက်တက်ကို ဘယ်လိုအနိုင်ကန်ရမယ်သိတဲ့ ဗီလာရီးရဲလ် ဘယ်လိုလူလုံးပြလာမလဲ – Sport Gaber
အသင်းရဲ့သက်တမ်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဥရောပဗိုလ်လုပွဲဆီ တက်လှမ်းလာတဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းနဲ့ နည်းပြသက်တမ်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် ဆုဖလားအောင်မြင်မှုကို သရဖူဆောင်းချင်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တဲ့ GDANSK ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ကန်ဖို့ ဗီလာရီးရဲလ် ဘယ်လိုလူလုံးပြလာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ဒီဗိုလ်လုပွဲဟာ အဝါရောင်ရေငုပ်သဘော်ကြီးတွေအတွက် ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာ ရုန်းကန်လာရတဲ့ ဥရောပဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ဟာ ထူးခြားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိနေပြီး ရည်မွန်နှိမ့်ချတတ်တဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်မြို့အဝင်လမ်းမှာ အောင်မြင်မှုဆုဖလားနဲ့ ပျော်ရွှင်ရပြီး Gdansk ကနေ အိမ်အပြန်လှဖို့ ​​​ကြိုးစားလာမယ့် အသင်းသမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံး ဥရောပဗိုလ်လုပွဲဆီ အူနိုင်း အမ်မရီက ဆွဲတင်လာခဲ့တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်။
ယူနိုက်တက်ကို ဒုက္ခလှလှပေးမှာ ဘယ်သူလဲ?
အာဆင်နယ်ကို နိုင်ပြီးမှတော့ ယူနိုက်တက်ကို နိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်လှတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆမှုတွေ ရှိနေချိန်မှာ သရဲနီတို့ကို ဒုက္ခလှလှပေးမယ့် ကစားသမားတွေက လာလီဂါရဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် ၃ ဦးမှာ စာရင်းပေါက်ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူးဂျရတ် မိုရီနို၊ ယူနိုက်တက်ကလိုက်နေတဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှူး ပေါလ်တောရက်စ်၊ အဓိကကွင်းလယ်လူဒန်နီ ပါရဲဟို၊ ကားလို့စ် ဘက်ကာနဲ့ အသင်းမှာ အမြန်ဆုံးကစားသမား Samu Chukwueze တို့ပါ။
အဝါရောင်တို့ ဘာကြောင့် နိုင်မလဲ?
ဗီလာရီးရဲလ်က လာလီဂါမှာတော့ ခြေစွမ်းသိပ်မငြိမ်လှတာတော့ ပြောစရာတချက်ရှိပေမယ့် ဥရောပအဆင့်ကတော့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်တန်ဖိုးဖြစ်နေတယ်။ မိနစ် ၉၀ အတွင်း အရာရာကို ပြောင်းလဲပစ်ကြလော့လို့ ဟစ်ကြွေးနေနှင့်လိမ့်မှာ အသေအချာပါ။
ဗဟိုခံစစ်က ပေါလ်တောရက်စ်နဲ့ ရောလ်အယ်လ်ဘီယောလ်တို့အတွဲနဲ့ တိုက်စစ်မှူးမိုရီနိုတို့သာ ခြေမငုပ်ခဲ့ဖို့ဆိုတာ အဓိကျအချက်ဖြစ်သလို ရဲရဲတက်၊ ရဲရဲဆုတ်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ချောင်းကစားသွားမယ့်အနေအထားက အမ်မရီရဲ့အောင်ပွဲလည်း ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေပြောင်းလာတဲ့ အူနိုင်း အမ်မရီဟာ စပိန်ကလပ်အတွက်တော့ ဘုရားတဆူ ဂူတလုံးလို ကိုးကွယ်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုရင် လွန်မယ်မထင်သလို အသင်းကို ဥရောပဖိုင်နယ်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြလည်းဖြစ်နေလို့ ယူနိုက်တက်ကိုသာ အနိုင်ကန်ရင် လာလီဂါမှာ မြင်းကောင်းခွာလိပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကိုပါ သင်ပုန်းချေပြီး ခွင့်လွှတ်သွားကြဖို့ ရှိနေပါတယ်။
အမ်မရီရဲ့အမြင်အရ ၄-၄-၂ ကိုပဲ ရွေးချယ်လာဖွယ်ရှိနေတယ်။ ခန့်မှန်းမှုတွေအရ ဂိုးဆာဂျီယို အာဆန်ဟို၊ ဗဟိုခံစစ် ပေါလ်တောရက်စ်+အယ်လ်ဘီယောလ်၊ ဘယ်ညာနောက်ခံအတွဲ မာရီယို ဂတ်စပါ+ ပက်ဒရာဇာ၊ ကွင်းလယ်ခံစစ်လူအ​ဖြစ် ကာပူယေး၊ ကွင်းလယ်ဗဟိုမှာ ထရီဂွယ်ရို့စ်၊ တောင်ပံတိုက်စစ်တစုံမှာ ပါရဲဟို+ပီနို တို့နဲ့အတူ တိုက်စစ်မှာ မိုရီနိုနဲ့ အယ်လ်ကာဆာတို့က ဦးဆောင်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဗီလာရီးရဲလ်ရဲ့ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ စပိန်ကွင်းလယ်လူ ဆန်တီ ကာဇိုလာက ဒီဗိုလ်လုပွဲအတွက် GDANSK ခရီးမှာ အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြဇာဗီရဲ့ ကာတာကလပ် Al Sadd မှာ ကစားနေတဲ့ ကာဇိုလာဟာ အသင်းဟောင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အသင်းဖော်ဟောင်းတွေကို အားတက်ရေးအတွက် လာရောက်အားပေးမှာပါ။
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲအတွက် အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ လူစာရင်းထွက်ပေါ်လာပါပြီ